NOOCYO DABACASAHA LOOGU TALAGALAY KAYDINTA XILLIGA JIILAALKA: NOOCA UU KU FIICAN YAHAY INUU DOORTO JOOGITAAN DHEER OO MIIS AH, GOOR DAMBE, HORE AMA MACAAN - KHUDRADDA
Karootada waa badeecad caafimaad leh oo dhadhan fiican leh oo si fiican u wanaagsan in la arko miiska qaboobaha. Haynta khudradda cagaaran ee cusub iyo adag tahay marka loo eego kallana way ka adag tahay khudaarta kale. Heerka hore ee diyaarinta kaydinta waa doorashada saxda ah ee abuurka.
Waa maxay darajooyinka dabacasaha ay ka fiican yihiin inay iibsadaan da'da dheer? Waxan ka hadli doonaa tan iyo waxyaabo kale oo badan oo ku jira maqaalkan.
Sida loo sameeyo doorashada saxda ah?
Xitaa karootada waaweyn iyo caafimaad leh waxay bilaabi karaan inay noqdaan madow iyo kallanaayo dhowr bilood ka dib kaydinta. Xaalad xun oo noocan oo kale ah waxay dhacdaa iyadoo la ilaalinayo heerkulka habboon iyo qoyaanka. Tan waxaa lagu sharaxay doorasho qaldan ee noocyo karooto.
Beerta aqoonta leh ayaa leh mudada iyo tayada kaydinta waxay ku xiran tahay xilliga beerto iyo dhaqanka xididka. Si aan u lumin kala duwanaanta kala duwan iyo Beelaha, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo qaar ka mid ah nuucyada.
Waxaa habboon in la iibsado noocyada taranka qoyska, maadaama ay ku habboon yihiin carrada iyo cimilada waddankeena.
Seeds ee soo saarayaasha shisheeye waxay yeelan karaan muuqaal wanaagsan, laakiin waxay u baahan yihiin xaalado koror ah oo kordhay (kaliya ee lagu koriyo ama leh tiro badan oo bacarin dheeraad ah).
Dalagyada xididada dheer waxay ku haboon yihiin ciidda dabacsan ee daboolaya oksijiinka. Si aad u jiifsato Maqsin waxaad u baahan tahay dalag labaad, kaas oo la beeray xagaaga hore.
Khudaarta wareegsan oo si dhaqso ah u jajaban oo leh dhalid yar.
Caawimaad! Wixii kaydinta muddada-dheer, waxaa lagu talinayaa in ay doortaan noocyo goor dambe-Bisaylkiisa. Karootiga ugu bislaaday ayaa la doorbidi karaa in la isticmaalo isla markiiba ka dib goosashada, laakiin noocyo kala duwan ayaa ku habboon da'weyn.
Marka xulashada noocyo kala duwan, waxaa muhiim ah in la bixiyo fiiro gaar ah si looga hortago caabuq., sababtoo ah xitaa qadar yar oo ku saabsan dusha sare ee xididku waa waddo xor ah oo loogu talagalay galitaanka bakteeriyada waxyeelada leh iyo fangaska. Haddii karootada la yareeyo, waxaa lagu kaydin karaa ugu badnaan 2 bilood.
Baro wax badan oo ku saabsan noocyada ku habboon dabacasaha iyo nolosha shelf ayaa laga heli karaa halkan.
Kooxda da 'yarta
Kooxdan waxaa ka mid ah khudradda asaasiga ah ee u bislaadaan 120-140 maalmood kadib biqilka. Waxaa ka mid ah sifooyinka - u-qabashada qabowga iyo iska caabinta cudurka. Iyadoo koriinkaraafka dheer ee dabacasaha aan lumin dhadhanka, dhammaan guryaha muhiimka ah waa la keydiyaa. Baro noocyada dambe ee kaydinta muddada-dheer waxay noqon kartaa qaab muuqda: xididku waa dheer yahay.
Haddaba noocyada noocan ah ee kooxda?
Marka hore tayada tayo leh. Celceliska miisaanka miro waa 200 g, dhererkeedu waa 20-25 cm. Waqtiga laga bilaabo biqilka ilaa qandaraaska farsamo waa 125 maalmood. Khudaarta cagaaran waxaa loo isticmaali karaa isticmaalka cusub ama ilaalinta. Qeybta hoose ama qoryaha ayaa la keydiyaa ilaa May-Juun, ma lumineyso tayada ganacsiga.
Maqnaanshaha muddada - 110-120 maalmood ka dib soo baxa caleemaha. Karootada midabka dhalaalaya midab dhalaalaya, qaab muuqaal leh, hilib casiir leh. Qalabka adeegsadaha looma lumiyo inta lagu jiro kaydinta.
Dhowr noocyo kala duwan ah. Waxay leedahay xilli sii kordheysa oo sii kordheysa - qiyaastii 140 maalmood. Lagu taliyay for kaydinta jiilaalka, laakiin wada baabbi'iyey cusub.
Ereyga weynaanta - 130 maalmood. Tilmaamo - sonkorta sare ee miraha (laguma talinayo dadka qaba sonkorowga). Qawaaniinta dabiiciga ah ee kaydka ah ayaa jiifa ilaa bilaha guga.
Khudaarta xilliga dhexe
Muddada bislaanshaha way kala duwan tahay 90 illaa 120 maalmood. Miraha waxaa ku jira nafaqooyin, dhadhan fiican. Markaad dooranayso noocyo kala duwan waxaad u baahan tahay inaad taxadar u yeelato magacyada soo socda.
Karootada waxaa lagu kala soocaa iyada oo aan qabyo ahayn beerashada.. Ma jirto asaas, carotene, fiitamiino, mareellooyin ayaa ku jira saxarka mug weyn. Kala duwanaanta loo qaabeeyey cimilada gudaha. Khudaarta Root waxaa lagu kaydiyaa ilaa xagaaga, sida ay yihiin noocyo goor dambe-Bisaylkiisa.
Waxyaabaha kala duwan waxaa lagu duugo by jilciya gaar ahaan jiilaalka. Xilliga dhirta - 110 maalmood. Dhererka miro - 17 cm Daryeelka fudud iyo waraabinta dhexdhexaad ah waxay saameyneysaa casiirka iyo dhadhanka dabacasaha.
Waxyaabaha kala duwan ee dhexdhexaadka ah iyo kuwa sare. Wakhtiga da'da waa 90-110 maalmood. Dalagyada rootiga kama badna inta lagu jiro gaadiidka, ha ku xoqin inta lagu jiro kaydinta.
Muuqaal - midab khafiif ah oo jilicsan. Dhererka karootada wuxuu gaaraa 18 cm, miisaanka - 120 g Waxaa xitaa koraya xitaa meelaha beeraha khatarta sare leh. Calaamado heer sare ah oo tayo leh.
Noocyada Bisaylkiisa hore waxay ku sii jiri karaan ilaa bartamihii-qaboobaha marka la qabsanayo waqtiga degitaanka dhulka. Waxaa muhiim ah in muddada bislaado uu dhaco dhamaadka Sebtembar-bilowgii bisha Oktoobar. Haddii xilliga korriinka ee noocyo kala duwan uu yahay 90 maalmood, waa in la beeraa ugu horeyntii dhammaadka Juun. Mudo 90 cisho ah (3 bilood) karootiga wuu daadin doonaa waxayna ku haboontahay kaydinta. Iyadoo la ilaalinayo xaaladaha heerkulka iyo qoyaanka, noocyada hore ee karootiga ayaa la keydin doonaa ilaa 4 bilood.
Digniin! Marka la beero miraha dabiiciga ah xagaaga, waxaa muhiim ah in la siiyo waraabin badan. Haddii kale, abuurka doonaa Gagaab muddo dheer, iyo caleemaha ugu horeeya si deg deg ah u engegi doonaa.
Maxaa noocyo loo oggol yahay in lagu kaydiyo?
Xilliga dhirta - 80-85 maalmood. Qaab dhismeedka rootigu wuxuu u eg yahay silsilad. Karootada waxay leeyihiin dhadhan wanaagsan, juiciness, dusha sare ee miro waa siman oo siman. Ka hor inta beerto waxay u baahan tahay diyaarinta ciidda tayada sare leh. Kala duwanaanshuhu sidoo kale wuxuu u baahan yahay waraabin badan. Iyadoo daryeel wanaagsan, miisaanka hal dabacas ayaa ah 100 g, dhererka - 15 cm.
Waxay tilmaamaysaa noocyo kala duwan oo xulashada Dutch. Harvest waa la soo ururin karaa 2 bilood gudahooda ka dib biqilka. Xilliga qaboobaha, waa lagama maarmaan in laga saaro karootada sariiraha aan ka horeyn 85 maalmood kadib.
Dalagyada Root ma jabin, adkaysi u fusarium.
Miraha ayaa si siman u qaabeeya, adkaysi u leh jajab, muddo dheer lagu keydiyay.
Haddii ay jiraan carruur qoys ama caruumeenta karootada, waxaa lagugula talin karaa inaad doorato noocyo macaan oo loogu talagalay kaydinta xilliga jiilaalka. Liistada noocyada macaan waxaa ka mid ah Minicore, dabacasaha Vitamin, gabadha Krasa iyo Nastena. Dhammaan noocyada soo bandhigay waa kuwo si u dulqaadan oo u adkaysta cagaha.
Miiska isu dhigma
Magaca Bisaylka Habka karootada Waqtiga dhirta (maalinta) Tayada kaydinta
Parisian, Carotel Hore Wareegga gaaban 60-90 Looma baahna kaydinta
Alenka, Artek, Laguna Hore Qumman, wareegsan 75-90 Kaydinta illaa 4 bilood
Shantane, NIIOH-336 Celcelis ahaan Boodhalka, dhererka dhexdhexaadka ah 95-120 6-7 bilood ayaa la keydinayaa
Boqoradda xilliga dayrta, Vita Long, Karlen Late Dheer, cidhiidhi ah 120-140 6-8 bilood
Waayo, ilaalinta tayo sare leh ee beergooyska waxaa jira siyaabo dhowr ah. Tiknoolajiyada oo dhan kuma kala duwanaan kakan, waxayna ku habboon yihiin shakhsi kasta. Karootada waxay u baahan yihiin in lagu keydiyo Maqalka, dhulka hoose ama godka garaashka.
Si loo ballaadhiyo baqshiinka oo yareeyo dhibaatooyinka kala duwan (caabuq leh kallana, biqilka), qaababka soo socda ayaa lagula talinayaa.
Karootada carrada. Qeybta hoose ee sanduuqa waa in laga buuxiyaa ciid (lakabka 4-5 cm). Ka bixi midhaha si aysan u taaban midba midka kale. Iskuday ciid, ku celi layers.
In sida balka. Habkani wuxuu la mid yahay kaydinta sida balka. Dhallinta dheeraadka ah, balka qallalan waa in la qaadaa: Phytoncides ee ay ka kooban tahay waxay dili doonaan bakteeriyada waxayna ka ilaaliyaan biqilka.
Baakad bac ah oo furan. Ciriiri iyo xitaa miraha aan lahayn qaab-dhismeedka waa in la qalajiyaa qorraxda, ka dibna ku duub bac caag ah. Waa mamnuuc in la xiro, sida xididada ay u jilcaan.
Karootada dhoobada. Karootiga oo dhan waa in lagu rusheeyaa xal dhoobo ah, ka dibna la qalajiyey. Marka xigta, ku rid goosashada sanduuqyada oo ku dheji qaybta hoose.
Talo! Habka kaydinta ee waliba, waa muhiim inaad raacdo nidaamka heerkulka (macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan heerkulka loo baahan yahay ee kaydinta dabacasaha, waxaad halkan ka akhrisan kartaa) Waxqabadka ugu wanaagsan: laga bilaabo -1 ilaa +2 gudaha, hubinta in wareegga hawada ku filan.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo keydiyo karootada waxaa laga heli karaa maqaalkan, halkaanna waxaan u sheegnay sida loo keydiyo karootada guriga.
Ka hor inta aan la dhigin karootada loogu talagalay kaydinta waa muhiim in la ururiyo lana diyaariyo waqtiga. Waxaad ka akhrisan kartaa sheekooyinka soo socda:
Goorta ay bilaabaan karootada goosashada iyo xididdo oo aad wada wadaagtaan?
Sidee loo diyaariyaa karootada si loogu kaydiyo?
Ma kar karaa karootada ka hor inta aan la kaydin?
Sidee loo jarayaa karootada loogu talagalay kaydinta?
Sidaas, kaydinta xilliga qaboobaha ugu wanaagsan ee-Bisaylkiisa iyo noocyada bartamihii dhexe. Karootiga ugu bislaaday waxaa lagu keydin doonaa oo keliya marka la eego xaalad soo deg deg ah ee dhulka (Juun-Julaay). Waqtiga daaweynta ee noocyada hore uma badna 4 bilood. Si aad khudaarta cagaaran u dhicin dhadhanka, ha u bilaabin inaad jejebiso oo ay biqlo, waxaa muhiim ah in la ilaaliyo habka heerkulka iyo qoyaanka.